From the Desk of Dr. Ahmed: School Guidance Counselors - Amjambo Africa
From the Desk of Dr. Ahmed: School Guidance Counselors
Diktoor Ahmed oo qoraalkan qoray isagoo jooga xafiiskiisa. fahmidda nidaam iskuuleedka Mareykanka ayaa ku ah caqabad ardayda iyo qoysaska soogalay Mareykanka. Iskuuladu waxay leeyihiin dad badan oo shaqaale ah oo ka caawiya dhamaan arimaha laxiriira waxbarashada. Caqabada kahor imaan karta kuwa ku cusub nidaamka ayaa ah inay fahmaan cidda kuhaboon in lala hadlo iyo mawaadiicda ay kala hadlayaan. Tusaale ahaan, qoyska waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato inay fahmaan qaybta is gaarsiinta gaadiidka ee ubadkooda geeya kana soo celinaya iskuulka. Ama waxaa laga yaabaa in ilmahoodu u baahdo in laga caawiyo habka arjiga jaamacada looqorto. Iskuuladu waxay leeyihiin dad kala duwan oo shaqaale ah oo ka caawiya dhinacyadan iyo dhinacyo kale oo badan.
Qaybta aan wax kuqoro ee joornalka Amjaambo (oo websaayd koodu yahay: amjamboafrica.com) Waxaan ku sharxay in iskuuladu leeyihiin shaqaale bulsho oo shaqadoodu tahay inay caawiyaan ardayda u baahan taageerada. Qaybta aan wax kuqoro ee joornalka Amjaambo waxaan ku dhiirigaliyay waalidiinta inay la xiriiraan shaqaalaha bulshada ee iskuulka ilmahooda ayna kala hadlaan wax walba oo ku saabsan waxbarashadooda.
Iskuuladu sidoo kale waxay leeyihiin lataliyayaal haga ardayda, arday kasta oo ku jira dugsi sarena waxaa uxilsaaran latalliye kaasoo labilaaba bilowga sanadka. Lataliyahan ayaa la shaqeeya ardayga sanadka oo dhan. Iskuulada qaarkood, ardaydu waxaay doortaan inay dhawr sano oo isku xiga ay kahelaan caawimaadda lataliyii markii hore labilaabay. Lataliyayaasha haga ardayda waxay bixiyaan adeegyo sida latalin tacliineed, latalin xirfadeed, iyo latalin shaqsiyeed.
Kuwa soo socdaa waa qayb kamid ah adeegyada gaarka ah oo lataliyayaasha haga ardayda ay ku caawiyaan ardayda dugsiga sare:
• Lataliyayaashu waxay isticmaalaan qaab ku saleysan cilmibaaris iyo farsamo si looga caawiyo ardayda inay ogaadaan dhinacyada ay kuleeyihiin awoodooda iyo waxyaalaha ay xiiseeyaan.
• Lataliyayaashu waxay ardayda baraan qaab istiraatiiji ah wax loo xalliyo si ay ucaawiso inay ku guuleystaan fasalka iyo dugsiga.
• Lataliyayaashu waxay la shaqeeyaan ardayda iyo qoysaska sidii loo abuuri lahaa barnaamijyada ardayda iyo jadwallada. Waxay ka caawiyaan ardayda doorashada koorsooyinka ku habboon waxyaalaha ay xiiseeyaan iyo heerkooda waxbarasho. La taliyayaasha hagida ayaa sidoo kale ka caawin kara ardayda inay raadsadaan xirfado kaladuwan.
• La taliyeyaashu waxay ka caawiyaan ardayda inay iska qoraan fasalada Machadyada bulshada iyo jaamacadaha inta ay weli ku jiraan dugsiga sare. Tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan oo ay helaan ardayda hamiga sare leh.
• Lataliyayaashu waxay la kulmaan ardayda shaqsi ahaan iyo koox ahaanba si ay uga caawiyaan isqoridda kulleejada kaasoo ah mid adag.
• Lataliyayaashu waxay hirgeliyaan codsiyada kuleejka ee ardayda. Waxay diraan taxanaha cadaynaya ardayga calaamadihiisa iyo waxyaalo kale oo taageeraya oo ay ku jiraan waraaqo codsi ah oo loo diro xafiisyada aqbala ardayda ee kuleejka.
Lataliyayaasha waxay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan waxbarashada ilmahaaga. Waalidiinta iyo ardaydu waa inay hubiyaan inay is bartaan lataliyaha haga ardayda bilowga sannad dugsiyeedka.
PreviousNow Wajiga labaad ee loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah: Guriga Soodhawaynta
Inaad shaqaale tahay iyo inaad yeelato ganacsi kuu gaar ah